Talyaaniga iyo USA: Laba qoraal oo dheeri ah oo ku qoran Liiska Dhaxalka Adduunka ee UNESCO
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Talyaaniga iyo USA: Laba qoraal oo dheeri ah oo ku qoran Liiska Dhaxalka Adduunka ee UNESCO
Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Dowladda • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Laba goobood oo kale ayaa lagu qoray UNESCO Liiska Dhaxalka Adduunka, taasoo soo afjartay qoraallada sanadkan ee Liiska.
Le Colline del Prosecco di Conegliano iyo Valdobbiadene (Talyaani) - Waxay ku taal waqooyi-bari Talyaaniga, goobta waxaa ku jira qayb ka mid ah muuqaalka dhirta canabka ah ee aagga wax soo saarka khamriga ee Prosecco. Muuqaalka waxaa lagu gartaa buuraha 'hogback', ciglioni - goosgoosyo yar yar oo geed canab ah oo ku yaal dhul cirif ah oo cows leh - keymo, tuulooyin yaryar iyo dhul beereed. Qarniyaal, dhulkan adag ee adag waxaa qaabeeyey oo la jaanqaaday nin. Tan iyo markii 17th qarnigii, isticmaalka ciglioni wuxuu abuuray muuqaal khaas ah oo loox leh oo ka kooban saf geedo canab ah oo isbarbar socda isla markaana qotoma oogada. 19-kiith qarnigii, ee bellussera farsamada tababarka canabka ah waxay gacan ka geysteen astaamaha bilicsanaanta muuqaalka.
20 Theth Qarnigii Dhismaha Frank Lloyd Wright (United States of America) - Hantidu waxay ka kooban tahay sideed dhisme oo ku yaal Mareykanka gudihiisa oo uu naqshadeeyay naqshadaha qeybtii hore ee qarnigii 20aad. Kuwaas waxaa ka mid ah Fallingwater (Mill Run, Pennsylvania), Herbert iyo Katherine Jacobs House (Madison, Wisconsin) iyo Matxafka Guggenheim (New York). Dhismayaashaasi waxay ka tarjumayaan “qaabdhismeedka dabiiciga ah” ee ay soo saartay Wright, kaas oo ay ku jiraan qorshe furan, cilado ka yimaada soohdimaha u dhexeeya bannaanka iyo gudaha iyo adeegsiga aan hore loo arag ee qalabka sida birta iyo shubka. Mid kasta oo ka mid ah dhismayaashaan wuxuu siiyaa xalal cusub baahida guryaha, cibaadada, shaqada ama raaxada. Shaqada Wright ee muddadan waxay saameyn xoogan ku yeelatay horumarinta qaab dhismeedka casriga ee Yurub.